မည်သည့် Xiaomi သို့မဟုတ် Redmi ပေါ်တွင်ထစ်ကိုဝှက်ထားရမည်နည်း။ | Androidsis
ထစ်ကသင့်ရဲ့ Xiaomi သို့မဟုတ် Redmi ကိုနှောင့်ယှက်သလား။ ဒါကြောင့်သင်ကဖုံးကွယ်နိုင်ပါတယ်!
Notch သည်ပုံမှန်အားဖြင့်လူသိများသည့်အတိုင်း notch သည်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများကြားတွင်အစဉ်အလာအရထုံးစံအရထုံးစံရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သော screen clipping solution ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောပထမဆုံးမိုဘိုင်းမှာအက်ပဲအိုင်ဖုန်း X ဖြစ်သော်လည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်မေလတွင် Essential Phone (PH-1) ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်မှ စ၍ စားသုံးသူများ၏လက်ခံမှုသည်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တောက်ပသောဖုန်းများစွာကိုတွေ့ရခဲသည်။ သို့သော်ဤအရာအမြောက်အများကိုမယုံကြည်နိုင်သေးပါ၊ သို့သော်၎င်းသည် notched terminal တစ်ခုကိုရရှိရန်အဆီးအတားမဖြစ်စေနိုင်ပါ။ Xiaomi သို့မဟုတ် Redmiကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုလုံးမှမည်သည့်မိုဘိုင်းကိုမဆိုအဓိကအားဖြင့်၎င်း၏ယေဘုယျအရည်အသွေးများနှင့်ငွေတန်ဖိုးအတွက်ကြောင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျဆင်းသည်။ ဒါကြောင့်အခုငါတို့ယူလာကြတယ် သင့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာမော်ဒယ်များ၏ထစ်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့သင်ခန်းစာ, မသိသောနှင့်များစွာသောအဘို့အဆင်ပြေသောသူတို့အဘို့ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်၏ Xiaomi (သို့) Redmi ၏အထစ်ကိုဖျောက်ထားရန်လွယ်ကူသည်
ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာကသွားတာပါ configuration ။ ဤအပိုင်းကိုဂီယာသင်္ကေတအောက်တွင်ဖော်ပြထားပြီး၎င်းကို scrolled လုပ်သည့် notification bar ၏ညာဘက်အပေါ်ထောင့်သို့မဟုတ်ပင်မမြင်ကွင်းပေါ်တွင်သင်လိုဂိုရှိသည့်နေရာတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်သင်ဟာ Xiaomi (သို့) Redmi ပေါ်ရှိမှောင်မိုက်တဲ့ mode ကို activate လုပ်နိုင်ပါတယ်
ပြီးနောက်, ၏အပိုင်းရိုက်ထည့်ပါ ဖန်သားပြင် [MIUI 11 တွင်၎င်းသည်၊ configuration ကို] ။ ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ဆဌမ box ကိုရိုက်ထည့်ပါသော Notch နှင့် Status Bar နှင့်၏အပိုင်း၌တည်ရှိသည် စနစ်။ ထို့နောက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ထစ်ဝှက်; နေသောရွေးချယ်စရာသုံးခုပေါ်လာပါသည် ဖုံးကွယ်မထားပါ, status bar မပြောင်းဘဲပုန်းနေပါ y status bar ကိုဝှက်။ ရွှေ့ပါ။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့၊ သင်ကသင်ရွေးချယ်လိုတဲ့နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုနှစ်ခုထဲကတစ်ခုကိုပေးရမယ်၊ ပထမတစ်ခုကိုပထမဆုံးရွေးလိုက်တယ်။ အထက်ပါနောက်ဆုံးမြင်ကွင်းတွင်အဆင့် ၅ ကိုကြည့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ထစ်ကသင့်ရဲ့ Xiaomi သို့မဟုတ် Redmi ကိုနှောင့်ယှက်သလား။ ဒါကြောင့်သင်ကဖုံးကွယ်နိုင်ပါတယ်!
၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလ၏အင်အားအရှိဆုံးစမတ်ဖုန်း ၁၀ လုံးကို AnTuTu မှပြောကြားခဲ့သည်